Kismaayo News » Daraawiishta Jubbaland iyo Shabaab oo is fara saaray
Daraawiishta Jubbaland iyo Shabaab oo is fara saaray
Kn: Wararka aan ka helayno deegaanka Buulaguduud ayaa sheegaya in maanta ay ciidamada Daraawiishta ee Jubbaland ay weerar qorshaysan ku qaadeen deegaannada Wirkooy iyo Baar-sanguuni oo ay isku uruursanayeen maleeshiyaad ka tirsan xarakada Alshabaab.
Weerar kan ayaa yimid kadib markii sirdoonka Jubbaland uu ka wer helay maleeshiyaadka Alshabaab oo deegaamadaasi isku uruursanayay si ay weerar gaadmo ah ugu qaadaan saldhigga ay ciidamada Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Buulaguduud.
Maleeshiyaadka Alshabaab ayaa la sheegayaa in weerar kaasi looga gubay gaari u siday saad iyo saanad, tiro maleeshiyaad ah halkaasi looga dilay. Sargaal ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa KismaayoNews u sheegay inay kala cayriyeen maleeshiyaad uu ku sheegay ‘nabad-diid’, wuxuuna intaasi ku daray inay dharbaaxo xun ku dhufteen dhagar qabayaasha.
Ma aha markii koobaad ee ciidamada Jubbaland ay weerar gaadmo ah ku qaadaan maleeshiyaadka Alshabaab. Sirdoonka Jubbaland ayaa sare u qaaday ilaha uu xoggaha ka helaayo ee ku dhex Jira Alshabaab taasi oo sahashay in dhagaro badan oo ay maleegayeen ay si dhibyar uga hortagaan ciidamada Jubbaland. Waxay sidoo kale ciidamada Daraawiishta Jubbaland kordhiyeen weerarada ku dhufo oo ka dhaqaaqda ah ee Shabaabku isticmaalaan.